“ရှမ်းပြည်နယ်နေ့” အခမ်းအနားကို အနှစ် ၂၀ ကျော်အတွင်း တရားဝင် ကျင်းပခွင့်ရရှိ | ဧရာဝတီ
နန်းဆိုင်နွမ်| February 7, 2013 | Hits:2,747
| | မူဆယ်တွင် ယနေ့ကျင်းပနေသည့် ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ အခမ်းအနား မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – SLTF)
ယနေ့ကျရောက်သည့် ၆၆ နှစ်မြောက် ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ အခမ်းအနားကို မြန်မာပြည်အနှံ့ တရားဝင် ကျင်းပခွင့် ပြုလိုက်သည်ဟု သိရသည်။
ယခင်က “ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ အခမ်းအနား” ဟု သုံးစွဲခွင့် မပြုခဲ့ဘဲ “ရှမ်းပြည်နယ် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ပဒေသာကပွဲ အခမ်းအနားနှင့် အစားအစာ ဈေးရောင်းပွဲတော်နေ့” ဟူ၍သာ ရန်ကုန်ရှိ ၉ မိုင် ရှမ်းကျောင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ရကြောင်း၊ အနှစ် ၂၀ တွင် ပထမဆုံး အဖြစ် ယခုနှစ်တွင် တရားဝင် ကျင်းပခွင့် ပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ပါတီမှ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ဦးစိုင်းလိတ်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“အခုလို တရားဝင် ကျင်းပခွင့် ရလိုက်တာကြောင့် ရှမ်း တိုင်းရင်းသားတွေ ကိုယ်ပိုင် ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အလမ်းတွေ ရလာပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ အရင်ကတော့ ရှမ်းပြည်နယ်နေ့၊ ရှမ်းအမျိုးသားနေ့ ဆိုပြီး မသုံးတာဘဲ ရှိပါတယ်။ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်းတော့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ဦးစိုင်းလိတ်က ဆိုသည်။
ရှမ်း တိုင်းရင်းသားများ၏ ရှမ်းရိုးရာ အစားအစာများ၊ ရိုးရာ အ၀တ်အထည်များ၊ ရှမ်းစာပေနှင့် ရေးသားထားသည့် စာအုပ် များကိုလည်း ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ရောင်းချပေးလျက်ရှိပြီး ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း နေရာဒေသ အသီးသီးတွင် နေထိုင်ကြသည့် ရှမ်း၊ ပအိုဝ်း၊ ပလောင်၊ ဓနု စသည့် တိုင်းရင်းသား တို့သည်လည်း တွေ့ဆုံပွဲများ၊ ပဒေသာ ကပွဲများကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမျိုးသား ကဇာတ်ရုံတွင် ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့နယ်မှ ရှမ်းအမျိုးသား ဦးစိုင်းလှိုင်းက “နှစ် ၂၀ ကျော်မှာ ဒီနှစ် ပထမဆုံး လွတ်လွတ် လပ်လပ် ကျင်းပခွင့်ရတဲ့အတွက် အရမ်း ၀မ်းသာတယ်။ ပြီးတော့ ရှမ်းလူမျိုးတွေ အထွဋ်အမြတ်ထားတဲ့ ရှမ်းအလံကိုပါ မူဆယ် တလမ်းလုံး စိုက်ထူခွင့်ရတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မူဆယ်မြို့တွင် ပွဲလုပ်ခွင့် ၁၀ နှစ် ကျော်ပိတ်ထားသည့် ရွှေသမင် ဘုရားကျောင်းကွင်း၌လည်း ပွဲလုပ်ခွင့်ပေးထားကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ ပွဲသည် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ၏ နေ့ထူးနေ့မြတ်ပွဲ ဖြစ်သည့်အတွက် ကျေးရွာ တချို့မှ လမ်းလျှောက်ချီတက် ဆင်နွှဲကြကြောင်း၊ ရှမ်းရိုးရာ ဈေးရောင်းပွဲတော်များ၊ ရှမ်းအကများ ရှမ်း တေးသီချင်းများဖြင့် လည်း ဖြေဖျော်ကာ ညနေ ၆ နာရီအထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“စယ်လန့်က လူ ၅၀ ကျော်လောက် မူဆယ်မှာ ကျင်းပတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ပွဲကို လမ်းလျှောက်ပြီးလာတယ်။ အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်ကနေ အသက် ၆၅ နှစ်အရွယ် လူကြီးတွေအထိ ပါတယ်။ မနက် ၅ နာရီ စယ်လန့်ကနေ ထွက်လာပြီး မူဆယ်ကို ၆ နာရီခွဲ လောက်ရောက်တယ်” ဟု မူဆယ်ဒေသခံ ဦးစိုင်းလှိုင်းက ဆိုသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းတွင်လည်း ရိုးလယ် ဘုရားနှင့် လွတ်လပ်ရေး ကျောက်တိုင် အနီးရှိ ပန်ပွဲကွင်းတွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်ပြီး ထူးခြားမှုမှာ ကျားအက၊ စကားရည်လုပွဲ၊ ရှမ်းရိုးရာ အကပေါင်းစုံ၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ကျန်းမာရေး ဟောပြောပွဲနှင့် ပြခန်း၊ ရှမ်းပြည်သမိုင်းနှင့် အစားအစာ ဆွေးနွေးခန်းတို့လည်း ပါဝင်မည်ဟု နမ့်ခမ်း ဒေသခံ ရှမ်းအမျိုးသား တဦးက ဆိုသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ကို ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ လွတ်လပ်စွာ ကျင်းပခွင့် ပြုသည့်အတွက် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ အလွန်
ပျော်ရွှင် နေကြကြောင်း၊ နှစ်စဉ် ကျင်းပနိုင်ရန် မျှော်လင့်ကြကြောင်း၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ နည်းတူ တခြားတိုင်းရင်းသား များလည်း ၎င်းတို့၏ ပြည်နယ်နေ့ အခမ်းအနား များကိုကျင်းပနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများက ဆိုသည်။
မြဝတီမြို့မှာ အစိုးရ စစ်တပ်နဲ့ DKBA တိုက်ပွဲဖြစ်အမ်ပီပီ ရဲမြင့်ရဲ့ “ကင်ဆာ”ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးနေစဉ် ကာလ အစိုးရစစ်တပ်နှင့် DKBA တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားဈေးချိုတော် ညဈေးတန်းရက္ခိုင့်တပ်မတော်
hongsaraj rodrueng February 7, 2013 - 9:09 pm confirm to good Business go to monsaters
Reply Sai Linyone February 8, 2013 - 12:15 pm Let the Union of Burma beahappy place. When the ethnics enjoy life, there will be no more fighting in the land.
Reply Myo Nyunt February 8, 2013 - 4:20 pm All must same opportunity because of brothers.
Reply ဗမာ February 8, 2013 - 8:31 pm ကောင်းသောသတင်းမို့ ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်ဗျာ။